यी हुन महिला हरु का सबै भन्दा सम्बेदनशील र यौनिक पार्ट | Rochak Khabar
यी हुन महिला हरु का सबै भन्दा सम्बेदनशील र यौनिक पार्ट admin
पुरुषहरु सँधै सोचिरहन्छन् महिलाको सबैभन्दा संवेदनशील भाग कुन् ? अधिकाँश पुरुषको आँखा पर्ने अंगहरु बाहेक अन्य अंगहरु पनि यौनिकरुपमा निक्कै संवेदनशील मानिन्छन् । कतिपय अंगमा पुरुषको आँखा परि हाल्छ भने कतिपय अंगमा भने छोएपछि यौनिक उत्तेजना बढ्ने हुन्छ । यस्ता अंगहरु कुन् कुन् हुन् त ?
बाकी Next मा क्लिक गरेर अर्को स्लाइड पढ्नुस
बाकी Next मा क्लिक गरेर अर्को स्लाइड पढ्नुस Next »